BehApk - Dhawunirodha Yemahara APK Android
Inosiyana nemudziyo, Entertainment
Inosiyana nemudziyo, Photography
Inosiyana nemudziyo, Paid
Inosiyana nemudziyo, Communication
5.7.3_0311202207, Vadivelu Comedy Music & Vadivelu Comedy Audio
Vadivelu Comedy Music
Vadivelu Comedy Music - Vadivelu Comedy Audio
BehApk - Dhawunirodha Yemahara APK Android - © Kodzero dzese dzakachengetwa
Isu tinoshandisa makuki pawebhusaiti yedu kuti tikupe iwe ruzivo rwakakosha nekurangarira zvaunofarira uye kudzokorora kushanya. Nekudzvanya "Bvuma", unobvuma kushandiswa kweESE makuki.
Iyi webhusaiti inoshandisa makuki kuti uvandudze ruzivo rwako paunenge uchifamba newebhusaiti. Kunze kweizvi, iwo makuki akaiswa muchikamu sezvinodiwa anochengetwa pabrowser yako sezvo akakosha pakushanda kwekutanga kushanda kwewebhusaiti.. Isu tinoshandisawo wechitatu-bato makuki anotibatsira kuongorora uye kunzwisisa mashandisiro aunoita webhusaiti ino. Aya makuki anozochengetwa mubrowser yako chete nemvumo yako. Iwe zvakare une sarudzo yekubuda mumakuki aya. Asi kubuda mune mamwe emakuki aya kunogona kukanganisa ruzivo rwako rwekutsvaga.
Makuki anodiwa akakosha kuti webhusaiti ishande nemazvo. Aya makuki anovimbisa zvakakosha kushanda uye kuchengetedza maficha ewebhusaiti, asingazivikanwe.
cookielawinfo-checkbox-analytics 11 mwedzi Iyi cookie yakaiswa neGDPR Cookie Consent plugin. Iyo cookie inoshandiswa kuchengetedza mvumo yemushandisi yemakuki ari muchikamu "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-inoshanda 11 mwedzi Iyo cookie inotarwa neGDPR cookie mvumo kurekodha mvumo yemushandisi yemakuki ari muchikamu "Functional".
cookielawinfo-checkbox-inodiwa 11 mwedzi Iyi cookie yakaiswa neGDPR Cookie Consent plugin. Makuki anoshandiswa kuchengetedza mvumo yemushandisi yemakuki ari muchikamu "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-mamwe 11 mwedzi Iyi cookie yakaiswa neGDPR Cookie Consent plugin. Iyo cookie inoshandiswa kuchengetedza mvumo yemushandisi yemakuki ari muchikamu "Zvimwe.
cookielawinfo-checkbox-performance 11 mwedzi Iyi cookie yakaiswa neGDPR Cookie Consent plugin. Iyo cookie inoshandiswa kuchengetedza mvumo yemushandisi yemakuki ari muchikamu "Performance".
viewed_cookie_policy 11 mwedzi Iyo cookie inotarwa neGDPR Cookie Consent plugin uye inoshandiswa kuchengetedza kana mushandisi abvuma kushandisa makuki kana kwete.. Iyo haichengete chero data rako pachako.
Anoshanda makuki anobatsira kuita mamwe mabasa sekugovana zvirimo zvewebhusaiti pasocial media mapuratifomu, unganidza mhinduro, uye zvimwe zvechitatu-bato maficha.
Performance makuki anoshandiswa kunzwisisa uye kuongorora akakosha ekuita indexes yewebhusaiti iyo inobatsira mukuunza zvirinani mushandisi ruzivo kune vashanyi..
Analytical makuki anoshandiswa kunzwisisa mabatiro anoita vashanyi newebhusaiti. Aya makuki anobatsira kupa ruzivo rwemetrics nhamba yevashanyi, Bounce rate, traffic source, etc.
Makuki ekushambadzira anoshandiswa kupa vashanyi ads akakodzera uye mishandirapamwe yekushambadzira. Aya makuki anoteedzera vashanyi mumawebhusaiti uye anounganidza ruzivo kuti ape akagadziridzwa ads.
Mamwe makuki asina kukamurwa ndeaya ari kuongororwa uye haasati aiswa muchikamu.